I-Klaas-Jan Huntelaar Ingane Yomlando I-Untold Biography Facts
Ikhaya STARS E-EUROPE I-Klaas-Jan Huntelaar Ingane Yomlando I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Hunter". I-Klaas-Jan Huntelaar Childhood Story kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela isizinda somndeni wakhe, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngefomu lakhe elinemigomo yemigomo. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abathinta i-Biography ka-Klaas-Jan Huntelaar okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Klaas-Jan Huntelaar Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
U-Klaas-Jan Huntelaar wazalwa ngosuku lwe-12th ka-Agasti 1983 eVoor-Drempt, eNetherlands. Wayengumntwana wesibili owazalwa nonina, uMaud Huntelaar noyise, u-Dirk-Jan Huntelaar.
U-Huntelaar wayeneminyaka eyisithupha kuphela lapho umndeni wakhe usuka endaweni yakhe yokuzalwa eVoor-Dremptto waya emzaneni okuthiwa iHummelo. Kwakusemzaneni lapho uHuttelaar akhule khona enothando futhi edlala ibhola nomfowabo omkhulu u-Niek noJelen umfowabo uJelle.
I-Dutch encane yayikhuthazwa ngabazali bakhe ukuba bavuselele uthando lwakhe lwebhola, ikakhulukazi unina owayengenasithakazelo ebhola lebhola kodwa ukholelwa ukuthi ukuhlanganyela kwabafana bakhe emdlalweni kwakuzuzisa. Akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuthi uHuntelaar abhalise eqenjini lebhola leVV H. en K. kanye nabafowabo. Ngamazwi akhe;
"Indaba yami yaqala ngo-H & K, lapho ngiphupha khona ngamagoli futhi ngiphakamise. Kwaqala ngokuzinikezela "
Lo mzuzu washaya umsebenzi wokwakha umdlalo webhola ubaba owasho ukuthi unethalente kusukela ngethenda.
"Waya esikhwameni sendawo eneminyaka emihlanu ubudala, futhi uzobona ngokushesha ukuthi unethalente kangakanani,"
Ukhumbula uyise u-Dirk-Jan ku-2012.
I-Klaas-Jan Huntelaar Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi we-Buildup
U-Huntelaar uthuthukise amakhono akhe e-footballing ku-club VV H. en K. yonyaka we-6 iminyaka eminingi, ebonisa ukusebenza okwenziwe amehlo okwenza ama-scouts avela ku-De Graafschap amnike isivumelwano sakhe sokuqala lapho esekhulile i-11 !.
Ngesikhathi eseDe Graafschap, u-Huntelaar wazibeka phambili ngemuva kokuba evivinywe ngezikhundla eziningana ezifana nokuzivikela, imideni, amaphiko, ngisho nomgcini wezinhloso !. Kungakapheli sikhathi, u-Huntelaar waziwa njengomshini wokulinganisa imigomo yokufaka imigomo ye-33 emidlalweni ye-20 yecala lentsha yenkampani phakathi nenkathi ye-1997-98.
I-Klaas-Jan Huntelaar Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Road To Fame
Njengoba u-Huntelaar aqhubeka nemikhankaso yakhe ngaphandle kokulahlekelwa ifomu, kanjalo namaqembu aphezulu-indiza aphendulela ekutholeni amasignesha akhe ezinkontileka. Kusukela ku-PSV lapho u-Huntelaar ongenakunqotshwa khona ngesikhathi emdlalweni wakhe wokuqala ngokufaka amagoli e-26 emidlalweni ye-23 yeqembu elisha leqembu.
I-feat yaphinde yabona u-Huntelaar ukuba abe ngumdlali ophezulu weqembu, amenzele indawo eqenjini lokuqala eqenjini lapho eqala khona u-3-0 ukunqoba uRBC Roosendaal ku-2002. I-19 eneminyaka eyisikhombisa ngaleso sikhathi yabe isikweletu kumaqembu ahlukene.
I-Klaas-Jan Huntelaar Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Owokuqala kwakunguDe Graafschap lapho uHuttelaar enza khona ukudumazeka. Nokho, yena wazikhulula eqenjini leqembu lesibili, i-AGOVV (ngenkokhelo) lapho eseqedile khona njengomdlali ophezulu weligi.
Ukubonisa ukuvumelana okungahle kube kuhle ukuba kube yiqiniso, uHuttelaar ekupheleni kwemali mboleko yakhe ne-AGOVV waphenduka ithuba lokusayina enye inkontileka ne "master masters" yakhe ye-PSV. Yena esikhundleni sakhe wathuthela eFrisian club Heerenveen lapho athola khona imigomo ye-17 emidlalweni ye-31 futhi wasiza uhlangothi lwakhe ukuba afanelekele ikomidi le-2005-06 UEFA.
"U-Hunter" ongeyena ozolahlekelwa kalula, wahlala phezulu emdlalweni wakhe ngemuva kwesizini esilandelayo, ngenxa yalokho, amaqembu amaningi amfuna emva kwakhe, kuhlanganise ne-Ajax, okuqinisekisile umqeqeshi omkhulu we-goal for 9 million Euros ku-2006. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Klaas-Jan Huntelaar Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
U-Huntelaar ubelokhu ebuhlotshaniswa nentombi yakhe ehlala isikhathi eside uMaddy Schoolderman cishe amashumi eminyaka eyi-2. Ama-birdbird aqala ukuphola njengama-adolescents bahlangana ngesikhathi sezinsuku zabo zesikole eRietveld lapho bahlwanyela imbewu yothando eye yaba khona ebuhlotsheni obugcwele.
Ukusheshisa okusheshayo kuze kube yimanje abashadile kodwa kakade banezingane ezimbili ndawonye. Ingane yabo yokuqala ngumfana ogama lakhe linguSeb. Wazalwa ngo-9 April 2009. Ingane yabo yesibili u-Alex wazalwa ngo-20th kaJulayi 2011. Ukwengezwa ohlwini u-Puck indodakazi (owazalwa ngo-6 August 2013) kanye nendodana Jim (owazalwa ngo-2 January 2017).
Ekhuluma ngesinqumo sakhe sokungashadi okwamanje, uHuntelaar uthi:
"Angiyena umuntu wendabuko. Nginomuzwa wokuthi sengishadile kakade, ngisho nangingenalo umshado. "
I-Klaas-Jan Huntelaar Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
U-Huntelaar wazalelwa emndenini wamalungu e-5. sikulethela imininingwane emndenini wakhe.
NgoBaba kaHuntelaar: UD Dirk-Jan HuntelaaR ubaba wendlalifa enkulu yomgomo kanye nomdlali odlala phambili webhola. Uxhase kakhulu emadodaneni akhe futhi ukhonza njengomshayeli wakhe edolobheni. Lapho ebuzwa ku-2012 ukuthi kungani eqhuba indodana yakhe engu-29, uDerk-Jan waphendula ngokuthi:
"Ngoba ngingumshayeli ongcono!"
Lokho kungengxenye kuphela Ubuntu bukaDoyk-Jan obuhle. Ngesikhathi u-Huntelaar ehambela eMal Madrid, ubaba we-3 uhlehlisiwe wanyunyelwa ngumlobi wezintatheli, owafuna ukwazi ukuthi abazali baseDutch baqala kanjani ukuthola izindaba mayelana namadodana abo athuthela eSpanishi. U-Dirk-Jan owazi kahle ukuthi lo mlobi wayengazi ukuthi wayekhuluma nomunye wabazali bakaHuntelaar waphendula:
"Angazi. Angizange ngizwe nabazali bakaHuntelaar".
Umama kaHuntelaar: Unina kaHuntelaar uMaud yilo kuphela ilunga lomndeni okungenani unesithakazelo ebhola. Izithakazelo zakhe zikhona imidwebo, isiko kanye nezilwane. Noma kunjalo, usekela imizamo yakhe yemidlalo yamadodana.
Mayelana nabafowabo bakaHuntelaar: Abafowabo bakaHuntelaar nguNiek noJelle. U-Niek ungowokuqala wabantwana bakithi. Uke waboshwa ku-2016 ngemuva kokushisa phakathi kukaHuntelaar, uSchalke noDortmund. Izizathu zokuboshwa kwakhe zazigxile ezindabeni zokuthi uhilelekile ekuphonseni amatshe ngokumelene namaFans aseDortmund ngemuva komdlalo.
Ngakolunye uhlangothi Umfowabo omncane kaHuntelaar uJelle. Ilungu elincane kunazo zonke lomndeni libukeka sengathi lifana noHuntelaar ukuthi abantu badideke ngaye umhlukumezi omkhulu.
UJelle, noma kunjalo, wenza kube yisibopho sokutshela abantu ukuthi ungubani ngempela.
"Ngitshela njalo ukuthi angiyona uKlaas-Jan, kodwa ngithola abantu kuhle kakhulu ukuthatha isithombe, kahle, ngenza lokho".
Mayelana nezihlobo zikaHuntelaar: Moving kude nomndeni oseduze u-Huntelaar ubudlelwane kuhlanganisa nobaba wakhe uHans, U-Hetty omncane, abafowabo uNico noHendrik kanye nomthetho u-Nikki.
I-Klaas-Jan Huntelaar Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Isizathu Esiphezulu Sesidlaliso
I-Huntellar iye yaziwa isikhathi eside ngegama lesidlaliso "Hunter", kusukela I-2004. Eqinisweni, abalandeli be-club yakhe yangaphambili uSc Heerenveen bafake iphosta enkulu umxhasi ophethe isibhamu esandleni sakhe. Kodwa-ke, i-Huntellar ayinayo inkinga nick njengoba echaza izizathu zayo ngendlela elandelayo:
Ngithanda "Hunter". Leli gama engingazibona ngalo. Ngemuva kwakho konke, njalo ngifuna ukufuna futhi ngiphakamise imigomo.
I-Klaas-Jan Huntelaar Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso okuphila komuntu siqu
U-Huntelaar uyindoda enokuthula futhi efuna ukuvumelana-ke okuphezu kwazo zonke izinto ezenza kube ngokuvumelana nalokho okushiwo yizinyathelo zakhe. Ukwazi ukusho ukuthi usemukele isiqubulo sika-Oliver Kahn sokuphila: Qhubekela phambili, qhubeka! Lapho uHuttelaar engekho emkhakheni wezemidlalo uhlangana nabangani nomndeni futhi esikhathini esikhethekile uhamba nekamu nabafowabo noma umkakhe nezingane.
Nakuba u-Huntelaar uye wazuza ubukhulu emsebenzini wakhe, ushiya okuningi ukuze acabange ngaye ngokusebenzisa izinga elibalulekile lobumfihlo.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Klaas-Jan Huntelaar Childhood Story kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-AC Milan Football Diary
I-Ajax Football Diary
I-Dutch Football Diary
I-Real Madrid Football Diary
I-Krzysztof Piatek Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Steven Bergwijn Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
I-Federico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Quincy Promes ebuntwaneni bamaNqaku kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
UFerland Mendy Ingane Yendaba Yenkulumo Plus Untold Biography Facts
C Ronaldo Ingane Indaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Luis Suarez Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Kwangathi 25, 2019